AN-TSARA NY TENY FAMPISEHOANA an'ny olona roa tsy mahalala anarana LY TOET sy XA XE - Tany Masina Vietnam amin'ny fandalinana Vietnam
2731 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
Profesora mpiara-miasa, Doctor of History Hung NGUYEN MANH
Nick anarana: Soavaly sarety ao an-tanànan'ny oniversite
Anarana Pen: voangory
Xa Xe : Raha mitazona ny chignon-ny toa azy ianao rehetra, dia avelao izany! Ho faty daholo ny mpanety rehetra.
Ly Toet: Raha ny volon-dehilahy toa anao, dia na dia tsy mitandrina mafy aza izy, dia ho mosarena daholo ihany ny barano rehetra.
(ankehitrinyGazety laharana faha-54 - Ngay NaySetsika mampihomehy [Ngày Nay] - Alahady 11 Aprily 1937 - P.209)
Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ] dia olon-droa tsy azo sarahina. Manana endri-javatra mitovy amin'izany izy ireo saingy manana endrika samy hafa: Xa Xe [Xã XệWiki puzzle.svgjereo ny sary), potiny dia nivezivezy, misy volon'osy volombava, ary loha toa barano toy ny voanio, tsy misy afa-tsy volo tokana tokana eo amboniny.
As for Ly Toet [Lý Toét], manintona toy ny vano sy manify izy toy ny sombin-maina maina, miaraka amin'ny volombavany kely sy ny lefony toy ny chignon. Na aiza na aiza handeha izy. Ly Toet [Lý Toét] mitafy akanjo nasionaly foana ary tsy mahomby mihitsy ny mitondra ny elo.
Caption: Ly Toet Ly Toet [Lý Toét] mitafy fitafiana nasionaly foana
ary tsy mahomby mihitsy ny mitondra ny elo
Caption : Xa Xe'sXã XệEndrik'anarana amin'ny teny anglisy Phong Hoa [Phong Hoá] (Fomba fiteny sy fomba fanao) gazety
- laharana faha-95 tamin'ny 27 aprily 1934 - Pejy 1.
Xa Xe [Xã Xệ] (manontany ny varotra): Misy amidy nify iray ve ianao amidy? Iray ny voloko. (Nalaina tao amin'ny magazine Today - nomerao No.59 nivoaka tamin'ny 16 Mey 1937 - pejy 331).
Ny mpamaky ny Phong Hoa [Phong Hoá] (Fomba fiteny sy fomba fanao) gazety isan-kerinandro tamin'io fotoana io dia nihaona tamin'ny olona roa, izay be herim-po sy be herim-po, ary niseho matetika toy ny mpirahalahy roa, teraka tao Avaratra. The Phong Hoa [Phong Hoá] magazine magazine isan-kerinandro dia gazety mahatsikaiky, navoakan'ny Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoàn] (Tarika literatiora tohanana). Taty aoriana, rehefa ny gazety isan-kerinandro Phong Hoa [Phong Hoá] lasa Ngay Nay [Ngày Nay] (Gazety anio), ireo roa ireo dia nilaza fa mbola nitana anjara toerana lehibe tamin'ity magazine malaza ity ilay olona. Noho io toe-javatra io, ary momba ny fisian'ireto olona roa lehibe ireto, dia ny mpamaky ary ny Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoàn] dia nanao fahadisoana rehefa nanondro ireo mpanakanto roa izay niterahan'izy ireo azy.
Araka izany, inona no fantatsika momba ny fandaharam-pianarana an'ireo olona roa ireo? Ny fikarohana ny fiaviany dia toa mahaliana ihany.
70 taona lasa izay, ny Phong Hoa [Phong Hoá] magazine magazine isan-kerinandro dia nikarakara fifaninanana hahazoana sary sketsika mahatsikaiky. Amin'io fotoana io, mpanoratra fa Son - manoratra pen Le Minh Duc [Le minh Duc] - Rtoa. Ai Lan's [Ái Lan] rahalahy sy tonian-dahatsoratra ho an'ny gazety mpankafy herinandro malaza any atsimo, izay karicaturista tena mahay, dia nandefa sketsa tany Avaratra handray anjara amin'ity fifaninanana ity (*). Asehon'ity sketsa ity Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ] mijoro eo amin'ny tetezana mizana ary eo ambaniny dia mahita izao manaraka izao:
"Xa Xe [Xã Xệ]: Well Bac Ly (Andriamatoa Ly): raha mba mandanja aza isika dia mizara roa, tsy hisy olana mihitsy!"
(*) Araka ny voalazan'i TU KENH - Tokony hamantatra ve ny mombamomba an'i Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ] - gazety Binh Minh [Bình Minh] (Down) - Saigon Mau Than [Sài Gòn Mậu Thân] Lohataona 1968 - p. 12.
Ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny lanjan'ireto olona roa ireto dia ny hatsikana sy ny fihomehezana ny tsy manan-tsiny amina fotoana iray. Amin'ny fomba ahoana no mizara roa ny lanjan'ny mahazatra? Ny sketsa voalaza etsy ambony dia nahazo ny loka voalohany ary navoaka tao amin'ny pejy voalohany Phong Hoa (tsy raharahantsika ny isa ao anatin'izany olana izany). Hatramin'izay dia nifamatotra izaitsizy ny fiafaran'ireto olona roa mifanohitra ireto - mitovy amin'ny sarimihetsika «tantara an-tsary»Matavy sy tondra”Nentina avy tany Frantsa ho any amin'ny firenentsika tao anatin'ny 30 na 40 ans. Ary koa, hatramin'izay fotoana izay, ny olona roa Ly [Ly] sy Xa [xa] dia nohararaotin'ny Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoànvondrona literatiora, ary ilay zaza “Xa Xe"[Xã Xệ] raha vao teraka dia nomena ny anaran'ny ray aman-dreny mpitaiza fa tsy anaran-drainy.
Amin'ny maha-endri-javatra manokana azy, ny mpamaky maro, manana endrika tsy hosodoko, dia mandrafitra ireo olona roa manana loharanom-pahalalana, ka mahatonga ny orientalis frantsay handinika azy ireo ho solontenan'ny olon-tsotra Vietnamese.
Ny hatsikana amin'izany isa izanympanao hosodoko am-panafody»Dia nifototra tamin'ireo toetra niavian'ireo olona voalaza etsy ambony ireo - ohatra ny nanintona ny lohan'i Xa Xe [Xã Xệ] ary nataony ho toy ny vodin-tsaka iray masiaka. Ary tena somary mampihomehy rehefa mandeha ny volo tokana Xa Xe's [Xã Xệ] ny loha dia mitovy amin'ny rambon'ny kisoa.
Taty aoriana, nindramina ilay sary etsy ambony dia ny Song [Hira] (Live) vaovao vaovao teo aloha Saigon [Sai Gòn] dia nampitaha ny mpampahory vaovao Ho an'i Van's [Tô Vân] loha miaraka amin'ny fehin'ny kintana sarimihetsika mahafinaritra Tham Thuy Hang [Thẩm Thuý Hằng]. Ity fomba fampitahana mifanohitra ity dia nampiasain'ny poeta Tran Te Xuong [Trần Tế Xương]:
(Nipetraka teo amin'ny sezany ny ramatoa frantsay nanangana ny borikiny.
Nidina teo an-kianja, dia niondrika ny lohan'ilay dragona ny mpahazo).
- Efa nahita kisoa mihazakazaka nanomboka androany maraina ve ianao?
- Tsia, izao vao hitako izao!
(Gazety anio - laharana faha-58 - Lehilahy sy raharaha - Alahady 9 Mey 1937 - pejy 305)
mpanao hosodoko Fa Zanaka [Fa Sơn] dia efa naka Xa Xe [Xã Xệ] mankany Hanoi hampahafantatra azy Ly Toet [Lý Toét], ka rehefa miverina miakatra atsimo, Xa Xe [Xã Xệ] efa naka Ly Toet [Lý Toét] miaraka aminy. Noho io antony io, Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ] dia niseho tamin'ny Trao Phung [Trào Phúng] (manesoeso) magazine sy the Cuoi Xuan [Cười Xuân] (Tono amin'ny Lohataona) gazety, raha aseho izy ireo mipetraka eo ambony tsihy sy misotro miaraka. Ly Toet [Lý Toét] manidina fisotro Xa Xe [Xã Xệ] ary nitanisa Tan Da's [Tan đaTononkalo:
(Moa ve ny fiainana ka maharikoriko na tsy maharikoriko anao
Ny fitaizana ny kaopy divay matsiro dia ny namako akaiky ihany no tiako).
Xa Xe [Xã Xệ]: Manatanteraka ny adidintsika isika
Ly Toet [Lý Toét]: Ary ankehitriny, afaka manome baiko amin'ny juniorinay isika.
(Nalaina tao amin'ny magazine Today - laharana faha-60 natonta tamin'ny 23 May 1937 - pejy 351).
Ny kaopy divay dia nisondrotra ambony ary ny tsy fahatokisana dia nanala Xa Xe's [Xã Xệ] loha.
Ny fahatsapana alahelo dia nanohy niaraka tamina olona roa izay nandeha an-tanàna, ary nahatonga Ly Toet [Lý Toét] hanao fahadisoana, rehefa nahita fehikibo voaroaka sy fihantonana vitsivitsy nipoitra avy teo amin'ny fako, dia nanao fahadisoana izy ary naniry ny hitondra azy ireo hody mba ho toy ny titbits.
Amin'ny maha-endri-javatra manokana azy dia misy ny sary mahatsikaiky ratsy, mampiseho fisehoana misy Ly Toet [Lý Toét] mitondra tavoahangy iray hividy divay. Rehefa teny an-dàlana dia nahatsapa tampoka izy ary nitady toerana sahaza ho azy rehefa nahita famantarana "tsy nanelingelina". Avy eo dia nanokatra ny satroka izy ary niondrika tao anaty tavoahangy raha niteny tamin'ny tenany izy hoe: "Ahoana no ahafahan'izy ireo mandrara ahy: tsy manao fahadisoana any ivelany mihitsy aho".
Ireo hevitra sy hevitra voalaza etsy ambony dia an'ny mpanoratra avokoa Tu Kenh [Tú Kềnh], fa arakaraka ny nifanafarantsika tamina olona sasany dia tsy mitovy ny dikan-teny satria araka ny finoan'ny olona mpanadihady azy dia Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ] noforonin'ilay mpanao hosodoko malaza taloha Nguyen Gia Tri (?)Nguyễn Gia Trí] izay nanao sonia ny sary nosoratany tamin'ny endrika an-tsoratra toa an'i Rigt na GTri (avy amin'ny anarany Gia Tri [Gia Trí]).
Anisan'ireo fanoharana momba ny Phong Hoa [Phong Hoá] Gazety, ankoatry ny mpanao hosodoko Nguyen Gia Tri [Nguyễn Gia Trí], nisy koa ny mpandoko Ho an'i Ngoc Van [Tô Ngọc Vân] izay nanao sonia anarana penina Ai My [Myi My] sy Ho an'i Tu [Tô Tử], ary mpanao hoso-doko hafa izay nanao sonia Dong Son [Dong Son] - anaran'ny mpanoratra mpanoratra Nhat Linh [Nhất Linh]. Araka izany, ilay dikan-teny no tena marina indrindra, ary tokony miandry ny hevitry ny mpampita vaovao sy lehilahy miresaka literatiora izay miahy ny tenany amin'ireo olona roa mampihomehy ireo.
Mahavita mandanjalanja ny tenantsika - mihetsika miaraka amin'ny tsy fahita firy ao amin'ny tenantsika ao amin'ny toe-javatra izay miova ny firenentsika - moa ve izany toe-javatra izany dia maneho hery iray, izay toa ny fitaovam-piadiana miafina fiarovana izay ananantsika nefa mila miatrika zava-dratsy, izay mamela antsika tsy ho resy mihitsy. Raha mikaroka indray ny fahazoana tsara kokoa ireo olona roa ireo Ly Toet [Lý Toét] sy Xa Xe [Xã Xệ], tsy ny hanendrikendrehana an'ireo olona tsotra sy mora ireo, fa ny tena te hanara-maso ny fandroahana sy ny fiteny ary ny feon'ny bourgeois manjelanjelatra maniry ny hianatra hanao fihetsika tsara.
Ly Toet [Lý Toét]: - Marina ve izany raha nianatra nilomano ianao, hianatra haingana dia haingana ianao?
Xa Xe [Xã Xệ]: - Fa maninona?
Ly Toet [Lý Toét]: - Satria manana balaonina- toy ny kibo ianao!
(Araka ny Today Magazine navoaka tamin'ny 1936-1937- Laharana No. 75 - Pejy 718).
Version Dikan-teny vietnamiana: Đi tìm "GIA PHẢ" của hai nhân vật ảo LÝ TOÉT và XÃ XỆ
(Visited 1,669 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← TEKNIQUE an'ny olona ANNAMESE - Fizarana 3: Iza no HENRI OGER (1885 - 1936)?
KARISORANA an'ny Lý Toét, Xã Xệ →
Comments Off amin'ny FAMPISEHOANA NY TENY FAMPISEHOANA an'ny olona roa tsy mahalala anarana LY TOET sy XA XE